SIDA LOO KORO BALSAM EE GURIGIISA - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Noocyada caadiga ah ee qolka qolka
Waqtigeennaba, waxaa jira in ka badan 400 nooc oo warshad ah, kaas oo dalal ka mid ah loo yaqaan "iftiin" (oo ah mudnaanta ubaxyo dhalaalaya). Balsam wuxuu noqon karaa geedka sanadlaha ah, iyo dilka ah, laakiin Waller's ama Waller's balsam (tan ugu caansan), balsams ambalaan ah, iyo balsamooyinka cusub ee Guinean, oo loo yaqaano isku-dhafka kooxa cusub ee Guinea, ayaa ah kuwa ugu badan guryaha.
Iyadoo daryeel wanaagsan, waxay ku duuli kartaa sanadka oo dhan, ku faraxsani leh ubax casaan ama casaan cas. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira noocyo leh ubax jaale ah, orange, cad iyo ubax lakac ah, laakiin dhirta laba-midab leh oo leh xarun kala-duwan ("indho") ayaa ah asalka ugu muhiimsan. Balsam caleemaha ayaa sidoo kale leh noocyo kala duwan oo midabo ah, oo ka bilaabma cagaarka caadiga ah ilaa casaanka ama bunni.
Xaalad kasta, doorasho kasta oo aad doorato, balsam sii kordhaya ee abuurka guriga ayaa noqon doona mid aad u xiiso badan oo xiiso leh adiga.
Ma taqaanaa?Dadka balsam la yiraahdo "touchy." Xaqiiqdu waxay tahay in ka dib pollination of ubaxyo, sanduuqyo leh abuur ah waxaa la aasaasay, taas oo, at ugu yar taabashada, isla markiiba u burburay. Midda labaad, wax yar oo aan caadi ahayn ee "magac" waa "Roly Wet."
Xeerarka ugu muhiimsan ee balsam
Haddii aad go'aansatid in aad guriga ka hesho balsam, laakiin aadan garanaynin sida si habboon loo beerayo warshad, marka ugu horeysa ee la sameeyo waa in lagu iibsado abuur tayo leh. Markaad dooranayso, waa muhiim in la fiiriyo nolol maalmeedka, noocyada kala duwan, nooca (sanadlaha ama sanadka) iyo kalsoonida wax soo saaraha. Haddii aad diyaar u tahay inaad qaadato fursad aad tijaabiso, waxaad isku diyaarin kartaa abuurka naftaada (taas awgeed, waa inaad iyaga ka soo qaadataa dhirta horeyba uga jirtey beerta).
Ka hor inta aan si toos ah loo beerin abuurka oo dheryay, ku rid xal daciif ah oo kiriimiga ah 10 daqiiqo kadibna qoyaan maalin kale biyo diirran.
Heerka xiga waa diyaarinta ciidda habboon. Marka la eego in geedo of warshad waa mid aad u xasaasi ah nooca iyo halabuurka, ciidda balsam qolka waa in ay ahaataa iftiin iyo dabacsan. Waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo isku dar ah peat iyo dhulka caleen, vermiculite iyo web aan ciriiri lahayn (oo loo siman yahay). Laakiin haddii aadan rabin inaad waqti wakhti qaadato, markaa waxaad iibsan kartaa dhul diyaarsan oo geedo ah, isaga oo ku daraya hal-shanaad oo ah vermiculite ama ciid, taasoo ka dhigi doonta ciidda dabacsan iyo neefta.
Waa muhiim! Beeraleyaal badani waxay aaminsan yihiin in ugu wanaagsan ee balsamku yahay aalad liidata acid, oo ka kooban saamiyo isku mid ah sod, perlite, humus iyo compost.
Heerka sare ee awoodda geedo waa inay ahaataa 7 cm (ama wax yar). Ujeedooyinkaas, waxaad isticmaali kartaa weel caag ah, dheri ama baaquli ballaaran. Qeybta hoose ee weelka la doorto, waa inaad sameysaa meelo dhowr ah oo aad ku daboolatid lakab dhoobo leh oo dhererkiisu yahay 2 cm, taasina ma oggolaan doonto in biyaha la galo ciidda ayna ka hortagaan xididdada ka soo baxa.
Ka hor inta aan beero miraha, waxaa lagama maarmaan ah in la buuxiyo dheriga dhulka iyo xalka xalka Fitosporin, taas oo gacan ka geysan doonta hagaajinta microflora ciidda oo ka ilaaliya cayayaanka badan.
Waqtiga ugu fiican ee beerashada miraha waa bartam-March. Xaaladdan oo kale waxaa suurtogal ah in ay ku farxaan ubaxyada ugu horreeya ee ubaxyada dhalinyarada ah bisha Juun.
Mawduuc muhiim ah marka beeridda - meeleyn ballaaran oo miraha dheriga ah, meel fog oo ka siman midba midka kale. Waxay u baahan yihiin in lagu beeray si aad u sarreeya, si tartiib ah u cadaadinaya cirridka qoyan ee ciidda, laakiin iyada oo aan loo dirin.
Waa muhiim! Heerkulka wanaagsan ee biqilka abuurka balsam waa + 22-25 ° C.
Ka dib markii shuruudaha oo dhan la buuxiyey, miraha waxay geyn doonaan booskooda dheriga, dhammaan wixii hadhaa waa in lagu buufiyo dalagyada biyaha oo ku rid weelka bac caag ah, ka dib marka la buuxiyo hawada.
Talooyinka loogu talagalay xannaanada bakeeriga gudaha
Haatan waxaynu ogaannaa sida si habboon u daryeelaan balsamic. Kaliya shuruudo yar waa in la tixgeliyaa: waafaqsanaanta nidaamka heerkulka, dayactirka heerarka loo baahan yahay qoyaanka, aqoonta dabeecadaha waraabinta, quudinta dhirta, iyo sidoo kale qanjiradooda iyo manjooyinkooda.
Balsam wuxuu jecel yahay iftiin dhalaalaya, laakiin xidhiidh lala yeesho geedka qorraxda tooska ah ayaa saameyn aad u xun ku leh ubaxa. Sidaa darteed, sii kordhaya geedka guriga, waxaa lagama maarmaan ah in la daaqado daaqada.
Isla mar ahaantaana, xilliga qaboobaha, balsam qolka wuxuu u baahan doonaa qadar ku filan oo iftiin ah, taas oo sidoo kale wax ku kordhisa ubaxiisa sanadka oo dhan (xilliga qaboobaha qorraxda ma ahan mid dhalaalaya).
Si taajka ah ee baadiyaha si siman u qurux badan oo xitaa, dheriga leh warshad waa in loo beddelaa si joogto ah, si kale u beddelaya dhinac kasta oo qorraxda. Nalalka la'aanta badanaa waxay keenaysaa xaqiiqda ah in dhirta ay joojiso soo saarida burooyinkeeda ayna lumiso soo jiidashada.
Ma taqaanaa? Balsam qolka wuxuu ku haboon yahay dadka ku dhashay calaamadda Leo.
U hoggaansanaanta heerkulka habboon iyo qoyaanka ku filan ee qolka waa hawl kale oo muhiim ah oo adeecaya ubaxlayaasha marka ay sii kordhayaan balsam. Guga iyo xagaaga, ubaxa wuxuu si fiican u dulqaadan karaa heerkul ah + 25 ° C iyo ka sareeya, laakiin keliya helitaanka wanaagsan ee hawada cusub iyo qoyaanka substrate ah. Xilliga jiilaalka, heerkulku waa inuusan hoos u dhicin + 10-15 ° C.
Tijaabada shubanka ee balsam ayaa sidoo kale dalbanaya qoyaanka hawada. Run, inkastoo aysan jeclayn kulul, laakiin qoyaan dheeraad ah ma aha had iyo jeer lagama maarmaan.
Tusaale ahaan, heerkulka hawada ee qolka uusan ka badneyn qiimaha 20-22 ° C, waxay noqon doontaa mid ku filan oo keliya si loo hubiyo in ciidda dheriga uusan ku qalajin.
Kordhinta heerkulka ka sarreeya qiimadan waxay horseedi doontaa uumiga degdegga ah ee qoyaanka iyo qoyaanka geedka. Haddii aad aragto in heerkulbeeggu ka soo wareegay calaamadda + 25 ° C, markaa waa waqtigii la qaadan lahaa qoriga buufinta, oo loo isticmaali karo in lagu buufiyo caleemaha dhawr jeer maalintii.
Waa muhiim! Heer kulul, waxaa jira suurtogalnimada caleemo dhicid sababtoo ah muuqaalka muuqaalka "saamaynta cagaarka" (heerkulka sare iyo qoyaanka). Sidaa darteed, waxaa ugu wanaagsan in la helo qaboojiye for baadiyaha, laakiin qolka cadaalad ah dhalaalaya.
Balsam wuxuu jecel yahay biyaha, iyo waraabinta waa mid ka mid ah shuruudaha ugu muhiimsan ee dabiiciga ah ee daryeelka. Bilaha xagaaga, marka maskaxdu ay inta badan ka baxdo, geedku wuxuu u baahan yahay waraabin badan. Si kastaba ha noqotee, marka biyaha la soo geliyo ciidda, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in dareeruhu uusan ku dhicin qoorta xididka geedka. Si arrintan loo sameeyo, waraabinta waxaa lagu sameeyaa dheriga dheriga, kadib marka qalliinka la dhammeeyo, biyaha xad-dhaafka ah ayaa laga xaaqayaa digsiga.
Sida dareeraha waraabka, waxaa fiican in la diyaariyo biyo jilicsan oo kala gooni ah, haddii kale waxaad si dhakhso ah u heli doontaa dusha cad ee dusha sare ee dhulka, taas oo muujinaysa heerkul sare. Xaaladdan oo kale, beeralayda khibrad leh ayaa lagula talinayaa inay bedelaan lakabka sare ee carrada.
Si loo helo xididada helitaanka hawo nadiif ah, dhulka dushiisa waa in mudo ah loo furfuro. Kaliya waa inaadan fulin nidaamka aad u qoto dheer (oo aan qoto dheereynin 1 cm), haddii kale waxaa suurtagal ah in waxyeello loo geysto nidaamka xididka geedka.
Wixii horumarin buuxda ee balsamkaaga wuxuu kaloo u baahan yahay bacarimis. Sida caadiga ah waxaa lagu soo bandhigay ciidda xilliga guga-xagaaga, marka geedka bilaabmaa bloom.
Maalmahan waa ay fududahay in la ogaado sida loo cuno balsam ee ubax, sababtoo ah wax badan oo Bacriminta kala duwan ayaa wakiil ka ah suuqa casriga ah. Si kastaba ha ahaatee, dhexdhexaadkan oo dhan, waxa fiican in la fiiriyo Bacriminta adag oo loogu talagalay dhirta ubaxa dhirta (qeybta nuska ah labadii usbuucba mar), inkasta oo ninkii beerta ka shaqeeyaa uu go'aaminayo sida loo quudiyo qoyaanka Vanka oo ku salaysan xaaladaha gaarka ah ee dayactirka.
Waa muhiim! Ka dib markii lagu beddelay balsam, Bacriminta waxaa lagu dabaqi waayey mudo ka badan saddex toddobaad.
Guntinta iyo xoqidda
Inta lagu guda jiro habka balsam ee tallaalka (badanaa guga), taajkii dhirta waa "sax". Sidaas darteed, haddii xilliga qaboobaha baadiyaha ayaa aad u koray, ka dibna la gooyaa balsam (qol) ayaa bixiya si loo yareeyo afkoda nuska. Isla mar ahaantaana, marka caleemaha ay gaareen dhererka la rabay, dushooda waxay xoqan yihiin, sidaas darted kicinayaan soo bixitaanka iyo koritaanka caleemaha cusub iyo ubax weyn.
Xirfadku waa farsameynta farsameynta dusha sare ee maqaarka, oo la sameeyo labada maqas ama si fudud gacmahaaga. Thanks to tallaabadan, burooyinkeeda hurdada ah ee soo kacaya, laakiin haddii meel gaar ah ay tahay mid aan loo baahnayn, ka dibna dib u soo celinta si tartiib ah ayaa loo jebiyey.
Gooyaa waxay ka caawisaa dib u nooleynta dhirta, iyo in la gooyo caleemaha apical ayaa loo isticmaalaa dhalmo xiga. Si loo wanaajiyo sifooyinka qurxinta ee balsam, waxaa kale oo lagama maarmaan ah in la soo saaro laamihii hore ee lafaha, iyo sidoo kale caleemo dhiman iyo ubaxyo.
Sidee loo bedelaa balsam gudaha ah
Marka laga hadlayo ubaxlayaasha, mid ayaa badanaa maqli kara su'aasha soo socota: sida si habboon loo beddelo "Qololaha qoyan". First of dhan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato in balsam qolka la transplanted guga, iyo kaliya haddii ay u baahan yihiin waxay sameeyaan xubin kaabe xagaaga. Intaa waxaa dheer, dhammaan dhirta dhalinyarada ah waxay u baahan yihiin isbeddel sanadle ah oo ku dhaca deegaankooda. Warshad qaangaar ah ayaa lagu beeray, ama ka dib 2-3 sano kadib waxaa si fudud loo cusbooneysiiyaa by xididdada gooynta sare (tani waa dhacdo aad u muhiim ah, sababtoo ah waqtiga balaarada kora oo noqdaan wax soo jiidasho yar).
Waqtiga ugu haboon ee bedelka balsam ee guriga waa dhamaadka bisha Febraayo ama dhammaadka Maarso, iyo taxanaha tallaabooyinka oo dhan waa sida soo socota:
Qaado dhererka cabbirka saxda ah (doorbidayaa weyn) kana buuxi rubuc rubuc;
Ku daadi ciidda dheriga ah ee loo diyaariyay sida ku xusan qashinka kor ku xusan;
Biyo diirran ciidda biyo diirran;
Ka hor inta aanad toos ahayn, uumi carrada dheriga, kaas oo aad u socotid inaad beerista geedka, sidaa darteed dhulka si fudud ayaa loo kala saari karaa xididada;
Si taxadar leh u saar dhirta dherigii hore, ka dib markii uu qoday dhinacyada oo dhan (sidaas darteed way fududaan doontaa in la qaato oo ay la socoto qalabka dhulka);
Si taxaddar leh u fiiri xididada oo ka saar dhaawacyada oo dhan, iyaga oo jaraya unugyo caafimaad leh.
Si buuxda uga saar carrada hore ee lagama maarmaanka ah, maadaama ay jirto halis waxyeello ah ubax laftiisa. Dhexdhexaadiyaha weelka cusub waa inuu ka weyn yahay kii hore, laakiin kaliya 2-3 cm, haddii kale dhirta ayaa bixin doonta dhammaan dadaalladeeda si loo dhiso nidaamka xididka, taasoo keeni doonta ubaxu.
Ma taqaanaa? England, balsam waxaa loo yaqaan "Diligent Lisa".
Faafinta balsam qolka
Faafinta balsam qolka waxaa la samayn karaa laba siyaabood: gooyn iyo abuurka abuurista.
Jarida waa hab loo jecel yahay dhirta sii kordhaysa. Waxaa si firfircoon loo isticmaalaa xilliyada gu'ga ama xagaaga, jarida dhirta duurka balsam. Dhererka qaybaha jarjarista waa shan illaa todobaatan mitir, oo mid waliba waa inuu leeyahay ugu yaraan laba lambar. Caleemaha iyo burooyinkeeda ku yaal hoose waa in laga saaraa.
Sidee si habboon u jaraan balsam? Xaqiiqdii, nidaamkani ma aha mid adag sida uu u ekaan karo marka hore muuqata. Diyaarin afkoda ayaa la gelin karaa weel biyo leh ka hor inta aan la samaynin xididada, ama isla markiiba dhulka ku degay. Sida ciidda ugu fiican, waxaa fiican in la isticmaalo peat, vermiculite iyo perlite, iyaga oo isku dhafan isku mid ah. Waa dhulka this in gooyn ah waxaa la dhigayaa, ka dib markii kaas oo carrada waxaa yar tartiib tartiib ah iyaga ku wareegsan. Markaas dhulka dushiisa waa qoyaan, weelka laftiisa waxaa la dhigaa bac caag ah.
Haddii gooynta ay ku koraan qol diirran oo dhalaalaya, waxay si qoto dheer u bilaabi doonaan labadii toddobaadba, kadib saddex bilood kadib waxay ku siin doonaan ubax qurux badan.
Si loo dhajiyo balsam leh miraha, waxaad u baahan doontaa inaad diyaariso isku-dar ah dhulka iyo perat (1: 2), ka dibna beeritaanka abuurka, heerkulka ku hayso + 20-25 ° C. Uma baahnid in aad dhulka ku aaso inta badan dhulka, qoto dheer oo ah 0.7-1 cm ayaa ku filan. Ka dib markii beero, carrada waxaa lagu rusheeyaa biyo oo lagu meeleeyay galaas. Seeds waa inay kor u kacdaa 8-10 maalmood kaddib marka la beerto (shuruudaha qiyaas ahaan).
Marnaba ma aha inaysan qulqulin ciidda, maadaama ay taasi keeni karto dhaawac xagga geedo "lugta madow". Ka dib markii geedo kor u kacay, waxaa suurtagal ah in ay si tartiib ah u itaal-dareyso hawo cusub. Marka geedo ku gaaro 1.5-2 cm ee height, waxay sameeyaan soo qaado dhirta.
Waa muhiim! Su'aasha ah sida dhirta qolka dhirta ee dheryaha u gaar ah waa inay soo baxaan oo keliya marka ilmo-dhalid kasta uu leeyahay 1-2 caleemo run ah.
Dhibaatooyinka, cudurada iyo cayayaanka balsam, la dagaallama iyaga
Beeraha lagu beeray dheriga iyo abuurista xaaladaha ugu wanaagsan ee koritaanka iyo horumarka, midna weligay ma hubi karo in dhirta caymisku ka dhan yahay dhammaan noocyada cudurada iyo dhibaatooyinka. Tusaale ahaan, heerkul aad u sarreeya ee qolka leh qoyaan hawada u hooseeya kuma jiraan habka ugu wanaagsan ee saamaynta ubaxa: caleemaha u engegay, ubaxuna si hoose ayuu hoos u dhacayaa. Si loo soo celiyo warshad gobolkeeda hore, waxaa lagama maarmaan ah in dib loo furo xaaladaha ugu wanaagsan ee koritaanka. Si kastaba ha ahaatee, waa in aan ilaawin in waraabinta badan oo waxyeellada u keeni karta balsamine, sababtoo ah waxay ka qayb qaadataa muuqaalka fangaska iyo horumarinta caaryarka.
Iyada oo muuqaalka astaamaha ugu horreeya ee cudur fungal ah, waa in la qaado tallaabooyin haboon: ubaxa waxaa isla markiiba laga saaraa dheriga, si taxadar leh u ruxruxa xididdada ciidda la uruuriyo, waxaa lagu shubaa weel leh dhul cusub oo dabacsan oo dheeli tiran iyo nidaam dheecaan leh.
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u hesho caleemaha dusha sare, bedelka lakabka sare leh dhulka cusub. Cabbiridda cudurka, waxaad mararka qaar hoos u dhigeysaa fursadaha dhirta badbaadada.
Marka ubaxu dhaco, waa lagama maarmaan in dib loo eego shuruudaha balsam. Gaar ahaan, sababaha "dayrta caleenta" waa badi hawada qallalan, waraabinta ku filan, heerkulka qolka oo yaraatay, iftiinka saboolka ah iyo quudinta dheeraadka ah.
Nalalka xumi ee qolka iyo la'aanta qorraxdu waxay sidoo kale saameyn xun ku yeelan kartaa midabka caleemaha noocyo kala duwan, taas oo, marka uu jiro iftiin iftiin ah, noqdaan kuwo caddaalad ah oo aan caqli gal ahayn. Arrintani waxay sidoo kale sabab u tahay isku dhafka badan ee caleemaha, kuwaas oo si xun u saameeya guryaha qurxinta ee balsam.
Ubaxa daciif ah ee dhirta ama maqnaanshaha dhammeystiran waxaa laga yaabaa in ay sabab u tahay yaraanta nafaqooyinka ama indho-indheyn ku beerista Bacriminta nitrogen taasoo kicin doonta koritaanka caleenta. Badanaa, dheriga ubaxa dhaadheer, oo ay ka buuxaan biyo aan joogto ahayn, waxay badanaa noqon karaan aasaaska dhibaatooyinkaas.
Inta ka hartay cudurrada balsam, waxaa suurtagal ah in aan la go'doomin jabinta caarada caarada, taasoo fududeyneysa qoyaan yar. Waxaad ka takhalusi kartaa ubaxa iyadoo la adeegsanayo xalalka insecticidal.
Intaa waxaa dheer, adoo isticmaalaya diyaargarow gaar ah, waxaad la dagaalami kartaa aphids (ama caddaan).